8/1/12 - 9/1/12 ~ हाम्रो कलम
मिडिया बुझाउने प्रयास
Friday, August 24, 2012 हाम्रो कलम 1 comment
विभिन्न क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता मिडियामा आइरहेकै हुन्छन् । अरूको अन्तर्वार्ता प्रचारप्रसार गर्ने सम्पादकहरूका अन्तर्वार्ता भने त्यति धेरै पढ्न÷सुन्न पाइन्न । यदाकदा विश्लेषकका रूपमा सम्पादकका धारणा प्रस्तुत भइरहे पनि उनीहरूका अन्तर्वार्ता नियमित रूपमा आउने चौतारी छैनन् । तर, मार्टिन चौतारीको कृति मिडिया संवादमा शेखर पराजुलीले मिडिया हाँक्ने सम्पादकहरूसँगै अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरूका धारणालाई पाठकसमक्ष ल्याएका छन् ।
आठ–दस वर्ष पत्रकारिता गरेर सम्पादक भएकाहरूले पढेको र परेको दुवै अर्थमा अनुभव बटुलेका हुन्छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय तहमा भएका घटनालाई नजिकबाट नियालेका र घटनापछाडिका विकासक्रम पनि बुझेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता समाज बुभ्mने गतिलो आधार हुन् । जुन विचारधाराबाट निर्देशित भएर मिडिया चलाइएको हुन्छ मिडियाका सामग्री पनि सोहीअनुरूपका हुन्छन् । तसर्थ, सम्पादकका धारणा बुभ्mनु भनेको मिडियाका उद्देश्यबारे स्पष्ट हुनु पनि हो ।
मिडिया संवादले छापा माध्यमका सम्पादकहरू युवराज घिमिरे, नारायण वाग्ले, कनकमणि दीक्षित, बबिता बस्नेत, ओम शर्मा, फोटो सम्पादक विकार रौनियार लगायत प्रसारण माध्यमका रघु मैनाली, गोपाल गुरागाईं, आरती चटौतसँग संवाद गरेको छ ।
नेपाली प्रेस स्वतन्त्र छ ?
पे्रस स्वतन्त्रताको सवालमा अरू सम्पादक भन्दा बढी आशावादी ओम शर्मा छन् । पे्रस स्वतन्त्रताको सवालमा उनको भनाइ छ, ‘अहिले नेपालमा पे्रस स्वतन्त्रताको अवस्था सन्तोषजनक छ । कम्तीमा राज्यसत्ताको उत्पीडनमा अहिलेको पे्रस छैन ।’ शर्माले, ‘आपराधिक समूहहरू जो तराईमा बढी सक्रिय छन् उनीहरूबाट नेपाली पे्रस खतरामा’ रहेको अनुभव गरेका रहेछन् । तर, युवराज घिमिरे, नारायण वाग्ले र कनक दीक्षितहरूले भने नेपाली पे्रसले पूर्ण स्वतन्त्रता नपाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । घिमिरेले, दलहरू ‘खासगरी माओवादी र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (गोइत) असाध्यै असहिष्णु’ भएको उल्लेख गर्दै ‘पीत पत्रकारिता, ब्याकमेल जर्नालिज्म र जवाफदेहिताको अभाव’लाई पत्रकारिता क्षेत्रकोे आन्तरिक खतरा मानेका छन् । वाग्लेले, ‘केही समयअघि नेकपा (माओवादी) मातहतका समूहबाट समस्या थियो भने अहिले स्वार्थ–समूहबाट खतरा’ भएको बताएका छन् । वाग्लेले भनेजस्तो स्वार्थ–समूहबाट त पे्रसलाई सधैं खतरा हुन्छ । तर कहिलेकाहीं त राज्य नै स्वार्थ समूह भइदिन्छ ।
प्रेसलाई सुरुदेखि नै राज्यले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने ठानेको थियो । २००७ सालपछिका अन्तरिम सरकारले पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने ठानेका थिए । २००९ सालमा मातृकाप्रसादको मन्त्रिमण्डल पतनपछि गठन भएको परामर्शदातृ सरकारले व्यवस्था गरेको तीन कानुनमध्ये प्रमुख छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन थियो । ‘सरकार विरोधी भावना फैल्याउने खालका पत्रपत्रिका लेख आदिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई दण्डसमेत भर्ने अधिकार स्थानीय कर्मचारीलाई दिइएको’ थियो । त्यस बेलादेखिको सरकारी नीतिले पञ्चायतकालमा निरन्तरता पाउनु स्वाभाविक हो । तर, २०४७ को संविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता पनि कतिसम्म अव्यावहारिक थियो भन्ने कुरा रघु मैनालीको अन्तर्वार्ताबाट छर्लङ्ग हुन्छ । २०५३ सालमा आफूहरूले रेडियो सगरमाथाको प्रसारणका लागि कैयौं पटक इजाजत माग्दा सरकारले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । युनेस्कोबाट प्राप्त रेडियो सामग्री भन्सार छुटसहित नेपाल भित्र्याएपछि परीक्षण प्रसारणका लागि अस्थायी फ्रिक्वेन्सी समेत पाउन नसकेपछि आफैं परीक्षण प्रसारण गरेको सरकारले थाहा पायो । त्यसपछि संचार सचिवले फोनमा, ‘तिमीहरूका सामान म वाग्मतीमा बगाइदिन्छु । के ठानेका छौ ?’ भनेर धम्काएको मैनालीले बताएका छन् (पृ.९४) । उनको बुझाइमा, ‘नागरिकको सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था ग¥यो । तर संचार नीतिमा त्यसलाई अलिकति साँघु¥याइयो । ऐन बनाउँदा अझ साँघु¥याइयो, नियमले त्यसलाई अझ कस्यो । अनि हुकुमले त ती सबै व्यवस्थालाई ठाडै उल्टाइदिएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।’
कनक दीक्षितको धारणामा, ‘राष्ट्रिय तवरमा स्वतन्त्रता सालाखाला पूर्ण छ भने स्थानीय तहमा धम्की र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने गर्दछ । पे्रस स्वतन्त्रता सुनिश्चित त छँदैछ, र नयाँ संविधानले पनि गर्नेछ तर व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न पत्रकारहरू निरन्तर संगठित र सजग हुनुपर्छ ।’ मधेश आन्दोलनमा पे्रेस नै तारो हुनुचाहिं पे्रस सजग हुन नसकेको उदाहरण हो । युवराज घिमिरेको बुझाइ छ, ‘मधेश आन्दोलनमा सञ्चार माध्यमको सहभागिताको त कुरै छोडौं उनीहरूका उचित मागबारे समेत कभरेज नहुँदा आक्रोशित हुनु स्वाभाविक पनि हो ।’ घिमिरेले पे्रसको तटस्थ भूमिकाबारे उठाएको कुरा पनि गम्भीर छ । उनले भन्छन्, ‘मिडियामा पूर्वाग्रह छ र यदाकदा सडकमा उत्रने कुरामा संयम र परिभाषित भूमिकाबारे हामीकहाँ छलफल भएको छैन । काठमाडौं आन्दोलनमा सञ्चारमाध्यम कि सडकमा थियो कि त्यसको पक्षधरका रूपमा सञ्चारमाध्यमको उपयोग गरिरहेको थियो । आन्दोलनताका आन्दोलनकारीबाट भएको अनुचित कामलाई सञ्चारमाध्यमले कहिल्यै प्रकाशित गरेनन् ।’
त्यस्तै, पुस्तकमा समावेश घटना र विचार साप्ताहिककी सम्पादक बबिता बस्नेतको अन्तर्वार्ताले साप्ताहिक पत्रिकाका बारेमा बुभ्mन सघाउँछ । साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनको उद्देश्य, कार्यसम्पादनको ढाँचा र अवस्थालाई बस्नेतको वार्ताले स्पष्ट पार्छ । विकास रौनियारको वार्तामा फोटो पत्रकारिताले प्राविधिक र पेसागत उन्नति गर्दै रहेको कुरा उल्लेख छ ।
पुस्तकले एफएम हस्तीहरूसँग पनि संवाद गरको छ । रघु मैनाली र गोपाल गुरागाईंसँगको वार्ता त एफएम म्यानुअल सरह नै छ । सत्र पानामा फैलिएको मैनालीको वार्ताले एफएम रेडियो विशेषगरी सामुदायिक एफएम स्थापनाको संघर्ष र एफएमहरूको वर्तमान अवस्थाको सपाट चित्रण प्रस्तुत गरेको छ । एफएम सञ्चालनसँग सम्बद्धहरूका लागि मैनालीको अन्तर्वार्ता गतिलो स्रोत सामग्री सरह छ । वार्तामा एफएम सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र सरकारी नीतिनियमको चिरफार गरिएको छ । गोपाल गुरागाईंको अन्तर्वार्ताले एफएमका लागि कार्यक्रम निर्माण गर्ने कम्युनिकेसन कर्नरको काम र उद्देश्यबारे जानकारी दिन्छ । यी दुईको अन्तर्वार्ताले सानो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका व्यावसायिक र सामुदायिक एफएमहरूलाई स्थायित्व र गुणस्तरीय प्रसारणका लागि मार्ग देखाएका छन् ।
राजधानी सहर काठमाडौंंलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अध्ययनलाई पुस्तकमा समावेश, धरानबाट प्रकाशन हुने ‘ब्लास्ट टाइम्स’ का सम्पादक÷प्रकाशक किशोरकुमार कार्की र वीरगञ्जका पत्रकार चन्द्रकिशोरको अन्तर्वार्ताले फराकिलो पारेको छ । उनीहरूसँगको वार्ताले मोफसलमा मिडिया विस्तारले विविध पक्षका एजेन्डाको सम्प्रेषण र त्यसमा सहमति वा विमति हुन सक्ने बहुलवादी समाजको निमार्णमा मिडियाले खेल्नसक्ने र खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा धारणा बनाउन सघाउँछ ।
कार्की र चन्द्रकिशोरको अन्तर्वार्ताबाट मोफसलमा पनि बिहानी चियाको चुस्कीसँगै पत्रिका पढ्ने बानीको विकास भएको बुझिन्छ । वार्ताले युवा तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता, स्थानीय मिडियाको आर्थिक निर्भरता लगायत सुखद अवस्थाको चित्रण गरेको छ । इन्टरनेटको उपलब्धताले तयारी सामग्री ‘कट एन्ड पेस्ट’ गर्ने तथा मिडियामा स्थानीयताको अभाव हुने जस्ता चुनौती पनि थपिएको छ । मोफसलका पत्रिकाले बन्द आह्वान गर्ने विज्ञापनसमेत छाप्छन् भन्ने जानकारीले पाठकलाई एकसाथ आश्चर्य र चिन्ता जगाइदिन्छ । पुस्तकमा उल्लेख गरिएका घटना विवरणले व्यावसायिक, व्यापारिक, राजनीतिक जुन उद्देश्य पे्ररित भए पनि यस्ता प्रवृत्तिमाथि बहस गर्न र एउटा निश्चित मान्यताको स्वीकृतिका मिडियाले पहल गरेको मान्न सकिन्छ । वार्ताले केन्द्रमा उपलब्ध भएजस्तो सुरक्षाविना मोफसलमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्दाको सास्तीबारे पनि जानकारी दिन्छ । चन्द्रकिशोरको भनाइ छ, पत्रकारिता जोखिमपूर्ण पेसा भए पनि मोफसलका पत्रकारलाई बढी जोखिम छ र त्यो बढ्दै गइरहेको छ ।
पुस्तकमा समावेश पत्रकारिता शिक्षणमा संलग्न रामकृष्ण रेग्मी र पी. खरेलसँगको संवाद पत्रकारिताको प्राज्ञिक विषयवस्तुमा केन्द्रित छन् । त्यस्तै, पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरी र पे्रस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालसँगको संवाद पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत र संस्थागत विकास लगायत विषयमा केन्द्रित छ । मिडिया क्षेत्रका पन्ध्र जनासँग संवाद गरिएको पुस्तक मार्टिन चौतारीले मिडिया बुझाउन गरेको सराहनीय प्रयास हो ।
मिडिया संवाद : नेपाली पत्रकारिताबारे अन्तर्वार्ता
पृष्ठ : २१८
मूल्य : १५०
प्रकाशक : मार्टिन चौतारी
Posted in: पुस्तक चर्चा
Wednesday, August 01, 2012 हाम्रो कलम6comments
सँगै हासे तिमीसँग बोलेपछि दुखेँ
तिम्रो शहरमा रहर घोलेपछि दुखेँ
नछोएको नदेखेको नभोगेको कहिल्यै
अमुल्य यौवनको मोल मोलेपछि दुखेँ
चाहनाको लालीमा सूर्य फूल्दै थियो
चन्द्रमाको उज्यालोले पोलेपछि दुखेँ
पुगे नीलो समुन्द्र चुमे नीलै आकाश
तर झुठको दरबार खोलेपछि दुखेँ
भिन्न शरीर एकात्मा भोगाई आधा आधा
तिम्रो अहंकारले विथोलेपछि दुखेँ ।
ओखलढुङ्गा हालः काठमाडौँ
Posted in: गजल